Golaha Shacabka oo ay haysato hubanti la’aan ah go’aanka Guddoomiye Mursal ee khilaafka taagan – Kalfadhi
Kadib wax ka badan todobaad oo uu Goluha Shacabku ku kala maqnaa khilaaf, maanta wuu kulmayaa. Waxaase jira walaac ah waxa dhacaya ama sida uu noqon doono jawiga uu Goluhu ku furmi doono, kuna shaqeyn doono maanta ilaa uu kulankiisa soo xirmo. Xildhibaanadda Golaha ayaa ka fikiraya go’aanka Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, ee khilaafka taagan, kaas oo u dhaxeeya Kuxigeennada Guddoonka Golaha iyo Guddiga Maaliyadda, laakiin saameeyey Golaha oo dhan.
Inkasta oo uu Guddoomiye Mursal horay u sheegay inuu Goluhu leeyahay go’aanka: haddii uu taageerayo kala dirista Guddiga Maaliyadda ama uu ka hor imaanayo, haddana waxaa Xildhibaanada badankood ku taagan hubanti la’aan ah waxa uu Mursal sameyn doono, marka uu maanta furmo Kulanka Golaha. Xildhibaan Maxamed Mursal Geelle ayaa u sheegay Kalfadhi inuu qabo rajo ah inuu Guddoomiyuhu ka hor yimaado go’aanka lagu kala diray Guddiga Maaliyadda.
“Waxaan filanayaa kulan fiican oo uu Guddoomiyuhu shaqadiisa ku hanto oo sharci daradii Guddoomiye Kuxigeennadu ku dhaqmeen lagu saxi doono” ayuu yiri Xildhibaan Geelle. Waxa uu aaminsan yahay in kala dirista Guddiga Maaliyaddu sharci darro ahayd. “Guddiga Maaliyaddu shaqadiisa ayuu ku laabanaya, lamana kala diri karo, waxii dhacayna qalad ayey ahaayeen” ayuu Xildhibaanku raaciyey hadalkiisa.
Kalfadhi ayaa Geelle weydiisay sida uu u arko haddii uu Guddoomiye Mursal taageero go’aanka Kuxigeennadiisa, isagoo sharciyad isticmaalaya, waxa uuna yiri “haddii ay dhacdo in uu Guddoomiyuhu ogolaado kala dirista Guddiga Maaliyada, waa in uu ku tashadaa in uu isagu dumiyay Golahii uu Madaxda ka ahaa”. Aragtidaas waxaa Xildhibaan Geelle la qaba Xildhibaano u badan kuwo ka tirsan Guddiga Maaliyadda iyo qaar mucaaradsan Xukumadda.
Laakiin, Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, oo u warramay Kalfadhi, ayaa sheegay inuu doonayo inuu kulanka ugu soo horreeya ee Goluhu ku bilowdo jawi degan, oo khilaaf li’i ah. “Waxaan ka filanayaa Kalfadhigii (Kulankii) Golaha Shacabka oo si fiican u sii socdo, xasilooni iyo daganaansho siyaasadeed oo dalka iyo Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya dhaxdiisa ka jirto” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow. Waxa uu ka digay in ajandaha Golaha ee kulanka ugu horreeya la siyaasadeeyo, oo xamaasad fara badan la geliyo.
Xildhibaan Jeesow waxa uu Kalfadhi u sheegay inuu markasta taageere u yahay go’aanka uu gaaro Guddoomiye Mursal. Waxa uu yiri “waxaan qabaa in loo daayo (go’aan ka gaarista khilaafka) Guddoomiyaha Golaha Shacabka: haddii uu ku raacayo Guddoomiye Kuxigaannadiisa kala diritaanka Guddiga Maaliyadda iyo haddii kalaba”. Sidaas oo kale ayey Xildhibaano fara badan ula dhacsanaan doonaan go’aan kasta oo uu Guddoomiye Mursal gaaro ka gaaro Kala Dirista Guddiga Maaliyadda.
Xildhibaan Cabdirashiid Xiddig ayaa bartiisa Feysbuugga soo dhigay inuu Golaha Shacabka dambi weyn ka dhex dhacay, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu yiri “waxaa Golaha ka dhacay waa dambi culus, waana in dambigaas masuuliyaddiisa cidi yeelato”. Xiddig ayaa intaas raaciyey “waana laba mid uun: Guddoonka ayaa xilkiisa Gudan waayay oo aan hubinin War-bixinta (Miisaaniyadda 2018), amase Guddiga Maaliyadda ayaa been-abuur sameeyay oo Xubnaha Guddiga ee hadda sheegay in lagu been abuurtay ayaa run ah”.
Waxa uu aaminsan yahay in Golaha iyo Shacabkaba laga galay dambigaas. Waxa uu qalinka ku adkeeyey in dambiga uu sheegay ciddii gashay ay ciqaab yeelato. “Waana in si degdeg ah Golaha loo hor keeno,
mana aqbaleyno in goobo Golaha ka baxsan lagu xaliyo” ayuu yiro Xildhibaan Cabdirashiid Xidig. Hadalkiisaas ayaa muujinaya iney jiraan kulamo ama isu-imaatino ay suurtagal ahayd iney ka dhaceen dibadda Golaha, oo lagu gorfeynayo arrinta la xiriirta khilaafka Golaha shacabka, gaar ahaan War-bixinta Miisaaniyadda 2018 iyo Kala Dirista Guddiga Maaliyadda.